Does Your Mind Really Belong to You? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Does Your Mind Really Belong to You?
ကျွန်တော်က တရားကို တွေ့တဲ့အဆင့်မှာ မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မလို့ပဲလို့ အလွယ် ပြောကြပါစို့ရဲ့။ ဘာသာရေးနဲ့ ခပ်ခွာခွာ နေခဲ့ရာက ကျွန်တော်တို့ရုံးက စာရင်းကိုင်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ တရားခွေတွေကို နာဖြစ်ခဲ့တယ်။
သည်ကမှတစ်ဆင့် ဆရာတော့်ကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီး လူကိုယ်တိုင် သွားဖူးခဲ့ရင်းက ကြည်ညိုလေးစားမှုတွေ ဆီးမနိုင်တားမရ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တရားဆိုတာကို လက်တွေ့ဘဝထဲမှာ စွတ်ကယ်၊ စွတ်ကယ် ချသုံး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော့်အဆုံးအမကြောင့် သဘောထားလေးလည်း နည်းနည်း မှန်လာခဲ့ပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာ ကျွန်တော် ချသုံးဖြစ်နေတဲ့အထဲက အများ စဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုကို ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ဘဝမှာ အတိုက်အခိုက်၊ အတိုက်အခံပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံခဲ့သူပါ။ အဲဒါ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဓိကက ကျွန်တော့်ပါးစပ်ပါ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က မစောင့်စည်းတတ်ဘူး၊ မထင်ရင်မထင်သလို တုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း စာလေးပေလေးက ဖတ်၊ အမေကလည်း စာတတ်၊ စာဖတ်သူဖြစ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ဝေါဟာရကလည်း ခပ်ကြွယ်ကြွယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်မို့ မပြောလိုက်နဲ့၊ တစ်ဖက်သားမှာ ပိဿာလေးနဲ့ ဘေးပစ်သလို ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။
အဲတော့ ကျွန်တော့်မှာ အလကားနေရင်း ရန်များပါတယ်။ သည်အထဲ လူက သူများထက် နည်းနည်းလေး ထူးနေသေးတယ်၊ အသံဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်အသံက မှတ်မိလွယ်တယ်၊ မျက်ခွက်ဆိုရင်းလည်း ကျွန်တော့် အခွက်က မှတ်မိလွယ်တယ်။ သင်လွယ်၊ တတ်လွယ်တာကလည်း သူများထက် နည်းနည်းလေး ပိုနေတတ်သေးတယ်။ ဘဝကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးကလည်း ဘယ်လိုက ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး၊ လူက မချမ်းသာလှပေမယ့် ခေတ်နဲ့အညီ နေနိုင်စားနိုင်အောင်လည်း ဖန်တီးပေးထားပြန်သေးတယ်။ နမူနာပြောရရင် ကျွန်တော့်မှာသာ ပိုက်ဆံက နှစ်သိန်း ပြည့်အောင် မရှိတာ၊ သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်တန်တဲ့ ပါလေရာ တယ်လီဖုန်းကို ရုံးစရိတ်နဲ့ ခပ်တည်တည် ခါးချိတ်နိုင်တာမျိုးပေါ့။
ဆိုတော့ အများအမြင်မှာ ကျွန်တော်ဟာ အလကားနေရင် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကြီးကို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော့်ရဲ့တုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်တဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အတိုက်အခိုက်တွေ၊ အတိုက်အခံတွေက နေရာတကာမှာ တွေ့ရပါတော့တယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း အဲဒါတွေကို လူမှန်းသိကတည်းက ကြုံခဲ့ရလေတော့ ကျွန်တော့်အတွက်က ရိုးနေပြီ။ တချို့ကတော့ ကျွန်တော့်ကို “လွတ်မြောက်နေတာ”လို့ ပြောကြတယ်။ သိုးဆောင်းဘာသာနဲ့ဆိုရင်တော့ existentialist (ဖြစ်တည်မှုပဓာနသမား)ပေါ့။ တချို့ကတော့ အရေထူလွန်းလို့ “ဆင်သားရေ”တဲ့။
ကျွန်တော်ဟာ ပုထုဇဉ်စစ်စစ်သာဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုက်အခံတွေ၊ အတိုက်အခိုက်တွေကြောင့် ဘာမှ မခံစားမိဘဲ ရှိခဲ့ပါ့မလား။ အသားပဲ၊ ထိမိခိုက်မိမှတော့ နာမှာပေါ့။ လူပဲ၊ ကိုယ့်ကို အကောင်းပြောရင် ကြိုက်သလို၊ မကောင်းပြောရင် ထိခိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူက ဘာပြောပြော ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က သိပ်ပြင်းထန်နေတော့ အများအမြင်မှာ ကျွန်တော်က သိပ်အရေထူတဲ့လူ၊ မတုန်မလှုပ်နေတတ်တဲ့လူ၊ ဒါမှမဟုတ် လွတ်မြောက်နေတဲ့လူ ဖြစ်နေတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိပ်ဂရုမထားတတ်၊ အားမနာတတ်၊ မညှာတတ်တာကြောင့် အဲလို အထင်ခံရတာပါ။ တကယ်က သိပ် လှုပ်ခတ်တတ်၊ သိပ် ဂရုထားတတ်ပြီး သိပ် အရေပါးလွန်းတာကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိဆုံးပေါ့။ တစ်ခုခုဆို ကျွန်တော်က တနုံ့နုံ့နဲ့ သိပ်ခံစားတတ်တဲ့သူမျိုးပဲ ဥစ္စာ၊ ဘာကိုမဆို ထိလွယ်၊ ရှလွယ်ခဲ့သပေါ့။
အဆိုးဆုံးက ဒေါသ။ ကျွန်တော်က နေရာတကာမှာ စိတ်မြန် ကိုယ်မြန်ရယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း စာအုပ်ကြီးသမားလို့ ခေါ်မယ်ဆို ခေါ်နိုင်တယ်။ သိုးဆောင်းစကားနဲ့တော့ perfectionist (ဦးတိကျ)ပေါ့။ အဲတော့ တော်တော်တန်တန်လောက်က ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့ မရဘူး။ စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်လွယ်တယ်လို့ အလွယ်ပြောကြပါစို့ရဲ့။
အဲလို စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒေါသက ငယ်ထိပ်ကို တက်သွားတတ်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့အဆိုးရွားဆုံး အားနည်းချက်တွေက အဲဒါပဲ။ နှုတ် မစောင့်စည်းနိုင်တာရယ်၊ ခံစားထိရှလွယ်တာရယ်၊ ခံစားထိရှလွယ်လွန်းမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါသကြီးလွန်းတာရယ်တို့ပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေကြသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်မိသားစုဟာ ကျွန်တော့်ဒေါသကြောင့် တော်တော့်ကို စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်။
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း ဗဟုသုတလေး အထိုက်အလျောက် ရှိ၊ စာလေးပေလေး အထိုက်အလျောက် ဖတ်ထားတဲ့သူပီပီ ဒေါသကြီးနေတာပဲ တရားသလိုလို၊ လူတွေကပဲ လွဲနေသလိုလို ပြောချင်ပြောတတ်နေသေ တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါသကြောင့် အမှားတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ရတဲ့အခါ၊ ဒေါသကြောင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထိခိုက်နေရတာတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လာတဲ့အခါ ဒေါသဖြစ်တာကို မှားမှန်းသိသလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်ရေးကလည်း ကျွန်တော်လို အတ္တကြီးတဲ့ သူက ပိုလုပ်ဖြစ်နေတာကိုး။
ပြောရရင် ကျွန်တော်က အတ္တသိပ်ကြီးတယ်။ ဖြစ်တည်မှုပဓာနသမားလို့ ပြောတာထက်စာရင် ကျွန်တော့်ကို အတ္တသမား (egoist) လို့ သတ်မှတ်တာက ပိုပြီး မှန်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အတ္တကို မွေးမြူ ထူထောင်နိုင်ဖို့ အခါခပ်သိမ်း စဉ်းစားနေတယ်၊ အားထုတ်နေတယ်။
သိပ်အတ္တကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ နေရာတကာမှာ တော်ချင်၊ တတ်ချင်၊ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာချင်တဲ့စိတ်ကလည်း ဆီးလို့ တားလို့ကို မရချင်တော့ဘူး။ တကယ် အတ္တကြီးတဲ့လူ ဖြစ်ရိုးမှန်ရင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတော့ဘူး၊ အနစ်နာခံဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။ တချို့က ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့သူကိုမှ အတ္တသမားလို့ ထင်ကြတယ်။ တကယ်က ကိုယ်ကျိုးကြည့်သူက သပ်သပ်၊ အတ္တဝါဒီက သပ်သပ်ပဲ။ ကိုယ်ကျိုးသမားက ကြွယ်ဝမှုနောက်ကို လိုက်တယ်၊ အတ္တသမားက ဂုဏ်သိက္ခာနောက်ကို လိုက်တယ်။ ဦးတည်ချက်ချင်း မတူတော့ဘူး။
ကျွန်တော်က အတ္တသမားပီပီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းသထက် ကောင်းနေအောင်၊ တော်သထက် တော်နေအောင် အမြဲတမ်း ပွတ်တိုက်ပေးနေမိတယ်။ သည်အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်ရေးက အခါမလပ် လိုအပ်လို့လာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်မှာ ထားပြီး သတ္တုချ ကြည့်တဲ့အခါ အထက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ကျကျနနကြီး တွေ့လာရတယ်။
သည်အခါမှာ နှုတ်ကို နည်းနည်း ထိန်းနိုင်လာတယ်။ ဒါကတော့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ခံစားထိရှလွယ်တာကိုကျတော့ ထိန်းလို့ကို မရဘူး။ ပိုဆိုးတာက ဒေါသ။ ဒေါသကိုလည်း ထိန်းလို့မရဘူး။
စာအစမှာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း သည်အချိန်မှာ ဆရာတော်ဦးဇောတိကနဲ့ သွားကြုံတယ်။ မနှစ်က ဆရာတော် အဖူးခံတဲ့ ရက်တိုင်းလိုလိုမှာ ဆရာတော့်ဆီမှာ ကျွန်တော် အချိန်ပြည့် ရောက်နေခဲ့တယ်။ ဆရာတော်က လာဖူးသူ ဧည့်ပရိသတ်နဲ့ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါ ကျွန်တော် အာရုံစိုက်နေဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ့ရက်ပိုင်းက သိသိသာသာကို စိတ်တွေ ငြိမ်းချမ်းလာတယ်။ ဘာမှ အားထုတ်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်သေးဘူး၊ အလိုလိုနေရင်းကို စိတ်က အေးချမ်းနေတာ။ ဒေါသလည်း နည်းသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆရာတော် နိုင်ငံခြားသာသနာပြုခရီးလည်း ကြွသွားပြီးတော့ သိပ်မကြာဘူး၊ ကျွန်တော်လည်း ဒုံရင်း ပြန်ရောက်တော့တာပဲ။ တစ်ခုတော့ နည်းနည်း ထူးလာတယ်။ ခါတိုင်း ဒေါသဖြစ်ရင်၊ ခံစား ထိရှရင် အလွှတ်မဲ့ဖြစ်နေတတ်ပေမယ့် အခုကျတော့ ဒေါသထွက်ရင် ထွက်မှန်း၊ ခံစားထိရှရင် ခံစားထိရှမှန်း ဖြည်းဖြည်းချင်း သိလာနေပြီ။
ဆိုကြပါစို့၊ ဒေါသထွက်နေတယ်၊ ခါတိုင်းဆို အဲဒီ့ဒေါသကြောင့် ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း လုပ်တယ်၊ မြည်တွန်တယ်၊ ဒါတွေကို ဆက်တိုက် လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ အတောက တော်တော်နဲ့ မသတ်ဘူး။ ခေါင်းထဲမှာကလည်း မူလ ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းကနေ ဆက်စဉ်းစားနေလိုက်တာများ၊ ဒေါသထွက်စရာတွေချည်း တန်းစီလို့ ဆင့်ပွား စဉ်းစားဖြစ်နေတာပါ။
အခုကျတော့ ဒေါသကြောင့် ဝုန်းဒိုင်းကျဲတာ၊ မြည်တွန်တာတွေတော့ ရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အတောက သတ်လို့ရချင်လာတယ်၊ “ငါ ဒေါသ ဖြစ်နေပါလား”ဆိုတာ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ခေါင်းထဲဝင်လာတယ် မသိ ဘူး။ အဲဒါဆိုရင် ဆင့်ပွားစဉ်းစားတာတွေက အလိုလို ရပ်သွားတယ်။
ဒါပေမယ့် သည်အဆင့်မှာ ဝုန်းဒိုင်းလည်း ကျဲပြီးပြီ။ နှုတ်ကလည်း စုံအောင် ပြောပြီးနေပြီ။ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ တရားကို သတိထားပြီး အားထုတ်ကြည့်တယ်။ အဲတော့လည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် လူပီပီ ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို မှန်မှန်လုပ် ဖြစ်နေဖို့ကျတော့ အပျင်းက ထူချင်တယ်။ တစ်လလောက်လည်း နေရော တရားကို သိပ်အားမထုတ်ဖြစ်ပြန်ဘူး။ အဲဒီ့မှာတင် ဒုံရင်းပြန်ရောက်တာပဲ။
ဒေါသတွေ၊ ခံစားထိရှမှုတွေက တိုးမလာတော့ပေမယ့် သိသိသာသာလည်း လျော့ကျမသွားသေးဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အဲဒါကို ပြင်ရမယ်လို့ သိနေတယ်။ သတိလေးကတော့ နည်းနည်းလေးစိပ်လာပြီ။ ခါတိုင်း ဒေါသထွက်ပြီး နာရီဝက်လောက်နေမှ ဒေါသဖြစ်နေမှန်း သတိရလာရာက ဖြည်းဖြည်းချင်း အချိန်တိုလာတယ်။ မိနစ်၂၀၊ ၁၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်၊ ၅ မိနစ် စသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိထားမိချိန်က မြန်လာပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် ပျောက်သလားဆိုတော့ မပျောက်ဘူး။
နည်းလမ်းရှာနေရင်းနဲ့ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ “ဒေါသကိလေသာ”ဆိုတဲ့ တရားခွေကို နာဖြစ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ အတော်ကိုက်တဲ့ တရားခွေလို့တောင် ဆိုရမယ်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ စိတ်မြန်သူများ၊ ဒေါသပေါက်ကွဲလွယ်သူများ သတိထားပြီး နာကြည့်သင့်ပါတယ်။
အခုဆောင်းပါးမှာ ပြောချင်တာကတော့ အဲဒီ့ထဲက ရလိုက်တဲ့ အသိလေးတစ်ခုကို စာဖတ်ပရိသတ်ကို ဝေမျှချင်တာပါ။ ဆရာတော် ဟောတာကို အခြေခံပြီး ကျွန်တော် နားလည်သလိုပဲ ပြန်ရေးပြချင်ပါတယ်။
လူတွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ တရား သဘောနဲ့ ပြောရင်တော့ ဘယ်သူမှ မပိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လို တရားနဲ့ ဝေးလို့ ကောင်းနေဆဲ ပုထုဇဉ်မှန်သမျှကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပိုင်တယ်ချည်း ထင်ကြတာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါ တကယ်လား။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်အိမ်သူကို စိတ်တိုင်းမကျဘူး၊ သူ့အပြောအဆို၊ အပြုအမူတစ်ခုခုကြောင့် ထောင်းခနဲ ဒေါသ ထွက်သွားတယ်။ ဒေါသဆိုတာ စိတ်မှာဖြစ်သွားတာနော်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့် စိတ်ကို ကျွန်တော်ပိုင်သေးရဲ့လား။ ဘယ်ပိုင်တော့မလဲ၊ ကျွန်တော့် အိမ်သူက သူ့အပြောလေးတစ်ခု၊ အမူအရာလေးတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါသထွက်အောင် လုပ်လို့ ရနေမှတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ဟာ သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှု အောက်ကို ဒူးထောက် ရောက်ရှိသွားပြီပေါ့။
သွားပြီ။ ကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ စိတ်က သူတစ်ပါးရဲ့ ခြယ်လှယ်မှုကို ခံလိုက်ရပြီ။ ဆရာတော့် တရားထဲကနေ အဲလိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော် ဆတ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။
တစ်ခါ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်က မျက်ရည်ကျရင် ကျတတ်သေးတယ်၊ အဲသလို အသည်းနုတာ။ ဒါပေမယ့် သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ သက်မဲ့ကြီးက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ဖမ်းစားလိုက်တာ၊ ခြယ်လှယ်လိုက်ပြန်တာပဲ။ ဘယ်လောက် ရှက်စရာကောင်းသလဲ။
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ အတ္တသမားအတွက် ကိုယ့်စိတ်ကို သက်မဲ့က ခြယ်လှယ်လွှမ်းမိုးတာ ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အသိက တော်တော့်ကို ကသိကအောက် ဖြစ်သွားစေပြန်တယ်။
မျက်ရည်ကျတာထားတော့၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ရယ်ရင်ရော၊ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ရော၊ အတူတူပဲပေါ့။ သက်မဲ့ရဲ့ခြယ်လှယ်မှုအောက်ကို ကျွန်တော့် စိတ်က တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ရောက်သွားတော့တာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒါကို တွေးမိတဲ့အခါ ပိုလို့ ကသိကအောက် ဖြစ်လာရတယ်။
အဲဒီ့အသိက ကျွန်တော့်ကို စောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်သွားအောင်ကို ပြုပြင်ပေးလိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ဟာ အတ္တကြီးမားတဲ့သူ၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပိုင်မှ ကျွန်တော့်အတ္တကို ထူထောင်လို့ရမှာ။ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်မပိုင်သမျှ အတ္တ သိပ်ကြီးလို့ မရသေးဘူး။ အဲတော့ ကျွန်တော့်စိတ် ကျွန်တော်ပိုင်ချင်တဲ့ဇောနဲ့ အဲဒီ့အသိကို လက်တွေ့ဘဝမှာ အသုံးချမိလာပါတော့တယ်။
သားလုပ်တဲ့သူကြောင့် စိတ်က တိုသွားတယ်။ ဒိုင်းဆို ချက်ချင်း သတိရတယ်၊ “ငါ့စိတ်ကို ငါပိုင်တာ၊ ငါ့သားက မပိုင်ဘူး။ သူက ငါ့ကို စိတ်တိုအောင် လုပ်လို့မရဘူး”အစရှိသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြောဖြစ်လာတယ်။ အလားတူပဲ အိမ်မှာ ရုပ်မြင်သံကြား ထိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါလည်း ဇာတ်လမ်းထဲ မျောပါသွားပြီဆိုတာနဲ့ “ငါ့စိတ်ဟာ သက်မဲ့ရဲ့ ခြယ်လှယ်မှုကို ခံရလောက်အောင် မနုဘူး”ဆိုတဲ့အသိက တန်းဝင်လာတယ်။ အဲလို သတိလေး တစ်ချက် ရှိလိုက်တာနဲ့ ခံစားနေတာတွေ အလိုလို ရပ်သွားတယ်။
သည်ကမှ တဆင့်တက်လို့ အလုပ်ခွင်မှာ၊ လမ်းပေါ်မှာ ကျွန်တော် ဖျတ်ခနဲ စိတ်တိုသွားတာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတာနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ စိုးမိုးခြယ်လှယ်မှုအောက်ကို ရောက်သွားပါလားဆိုတဲ့ အသိက နောက်က ထက်ချပ် ကပ်ပါလာတော့တယ်။ သည်အခါ စိတ်က အလိုလို ပြေသွား၊ ပေါ့သွားပါပြီ။
အဲလို နေကျင့်ရလာတော့ အတော်လေး နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းလာပါတယ်။ စိတ်နေလို့ ကောင်းတာကို ပြောတာပါ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ပိုလို့ အာရုံစိုက်နိုင်လာသလို လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကိုလည်း ပိုလို့ မြင်လာ တယ်။ ယုတ်စွအဆုံး၊ စာရေးတဲ့အခါမှာတောင် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို တည်ပြီးပြီဆိုရင် လက်က အလိုလို လှုပ်ရှားလာပြီး ဝါကျတွေ တစ်ကြောင်းပြီး တစ်ကြောင်း လျှောခနဲ လျှောခနဲ ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဆိုကြပါစို့၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါ လှုပ်ရှားတဲ့ စိတ်ကို သတိလေးနဲ့ပြန်ထိန်းရင်း ဆက်ကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်။ သည်လို သတိနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ ဒါရိုက်တာတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို ပိုသတိထားမိလာတယ်။ စကားလုံးတိုင်း၊ နောက်ခံ အသံတိုင်းကိုလည်း ပိုသိလာတယ်။
အဲသလိုပဲ၊ ကျွန်တော့်မိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို စိတ်တိုစရာတစ်ခုခု ပြောလာတဲ့အခါ၊ ပြုလာတဲ့အခါမှာလည်း သတိလေး ရှိသွားတာနဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို အမှန်အတိုင်း သုံးသပ်နိုင်သွားပါတော့တယ်။ စိတ်က အတိုင်းအဆ မရှိဘဲ တိုမနေဖြစ်တော့ဘူး။
ဆိုလိုတာက သုံးသပ်မှုအားလေးက ပိုကောင်းလာတာပါ။ အမြင်လေးက ပိုတည့်သွားတာပါ။ အရင်က ဒေါသနဲ့ မြင်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖယ်ပြီး တစ်ဖက်တည်းပဲ တွေးတယ်၊ အခု ဒေါသ မပါဘဲ ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်ပါ ပါလာတယ်၊ နှစ်ဖက်လည်း မျှတွေးနိုင်လာတယ်။
တရားတွေပါ ထည့်ရေးတော့ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ဒါဟာ တရားအလုပ်တွေကို ပြောနေတာလို့ တွေးကောင်း တွေးနေမိပါလိမ့်မယ်။
မဟုတ်ပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ အန္ဓပုထုဇဉ်အတွက် ကျင့်နိုင်ခက်ခဲတဲ့ တရားကို ဆွေးနွေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အတ္တနဲ့ယှဉ်တဲ့ ပုထုဇဉ်တို့အနေနဲ့ လူ့ဘောင် လူ့လောကမှာ ကျင်လည်ကျက်စားရင်း အာရုံအသီးသီးကို ခံစားနေရာမှာ သဘောထားလေး တစ်ချက် ပြောင်းသွားတာနဲ့ နေလို့ ပိုကောင်းသွားတဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်လေးတစ်ခုကို မျှလိုက်တာ သက်သက်ပါပဲ။ ဘာတရားမှ မပါပါဘူး။ လူအဖြစ် နေတဲ့ဘဝမှာ စိတ်ဆိုတာလည်း ရှိနေမှာပါ။ အဲဒီ့စိတ်ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေမှာ ထိခိုက်နေရတာပါပဲ။
အဲတော့ အဲဒီ့စိတ်ကလေးကိုသာ အပွန်းအရှ မခံဘူးဆိုရင် နေရတာလည်း အလွန်ကောင်းသွားနိုင်တာမို့ လိုသလို သုံးကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။
တချို့က ကိုယ့်ကိုစော်ကားရင်ရော ဒေါသ မဖြစ်ရတော့ဘူးလား၊ ငြိမ်ခံနေရမှာလားလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ငြိမ်တော့ ခံစရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒေါသ မပါဘဲနဲ့ တုံ့ပြန်တာကတော့ အမှားနည်းပြီး ပိုမို ထိရောက်တတ်ပါ တယ်။ အလားတူပဲ၊ တခြားခံစားချက်တွေကို ရှေ့တန်းမတင်တော့ဘဲ အရာရာကို ခံစားချက်မဲ့စွာ ချဉ်းကပ် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် လူ့ဘဝမှာ လူအဖြစ်နေရတာကိုက ပိုလို့ အရသာရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းနည်းစွာ ဆောင်ရွက်တာ၊ ကြောက်ရွံ့စွာ ဆောင်ရွက်တာ၊ ပျော်ရွှင်စွာ ဆောင်ရွက်တာ၊ အံ့ဩစွာ ဆောင်ရွက်တာ၊ စိတ်တိုစွာ ဆောင်ရွက်တာတို့ထက် စာရင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆောင်ရွက်တာဟာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း မြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သည်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာကိုပါ ထည့်ထားတော့ တချို့က တွေးပါလိမ့်မယ်၊ ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တာ ဘာလို့ မကောင်းရမှာလဲလို့။ ပျော်လွန်းရင်လည်း မှားတတ်တာ၊ အမြင် စောင်းသွားတတ်တာ သဘာဝပါ။
ဒါကြောင့် စိတ်ကလေးကို သေချာထိန်းပြီး ခံစားချက်မပါဘဲ တည်ငြိမ်စွာ ရှုမြင် သုံးသပ်နိုင်ရင်၊ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် အမှားကင်းပြီး အရာရာမှာ အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
စာဖတ်သူများလည်း ကျွန်တော်ပြောတာ ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင် ကိုယ်တိုင် ပြန်စဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်တာ လုပ်သွားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။
၁၉၉၈ခုနှစ်က ထုတ်ဝေတဲ့ Fashion Image မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် ၈၈၀/၂၀၀၄(၉)နဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ “လက်တွဲဖော်”စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေထားတဲ့ အတ္တကျော်ရဲ့ “ဖြေတွေးလေးများ”စာအုပ်ထဲက စာတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
Author lettwebawPosted on 30 March 2010 30 March 2010 Categories Reproduction, Thoughts
2 thoughts on “Does Your Mind Really Belong to You?”
Very nice post!Thank you.
30 March 2010 at 5:34 pm
ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ တူမလဲ ဆရာတော် ရဝေနွယ်(အင်းမ) ရေးတဲ့ဒေါသကို ဘယ်လိုပယ်မလဲ ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီးကတည်းက ကိုယ့်ဒေါသကိုယ် သိလာတယ်။ ခုဆို ဒေါသကို တော်တော်လေးထိန်းချုပ်တတ်နေပြီ။ တကယ့်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ ပို့စ်တခုလို့ပဲပြောပါစေတော့နော်း)
Previous Previous post: A Way of Thinking
Next Next post: Liver? Transplanted